Abwaan Nidaamiye oo Muqdisho lagu aasay -SAWIRRO – Radio Muqdisho
Abwaan Nidaamiye oo Muqdisho lagu aasay -SAWIRRO
Alle ha u naxarsitee abween Maxamed Cumar Nuur “Nidaamiye” oo shalay ku geeryooday maqaalada Muqdsiho ayaa maanta lagu aasay isbitaalka Madiina ee maqaalada Muqdisho.
Aaska Marxuumka waxaa ka qeyb galay wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamuud Cabdi Xasan “Beekoos” agaasimaha guud ee wasaaradda iyo ehellada marxuumka iyo masuuliyiin kale.
Ugaas Cabdi Daahir Ugaas Nuur oo ka mid ah ehllada marxuumka ayaa ka sheekeeyay Abwaanka iyo aqoontii uu u lahaa.
“Alle ha n naxariistee, Maxamed Cumar Aniga waxaan u ahay adeer laakin inta badan aniga isku meel ma joogin, balse waxaa uu ka mid yahay dadka wax taray dalka, waxuu ahaa afmaal, waxa uu na ka mid yahay dadka u soo halgmay dalka, Tariikha wanagsan waxa uu ku dhex lahaa ummada Soomaaliyeed, kolleey kaalintaas waa la dareemi doona. Inshaa Allah waxaan rajaynayaa in Jannadii farsowso uu Alle ka waraabiyo”.
Wasiiru dowlaha wasaarada warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Maxamud Cabdi Xasan Beekos ayaa tacsi uu diray dhamaan ehlada iyo asxaabadii uu ka tagay Allha u Naxariisee marxuun Maxamed Cumar Nidaamiye.
“Anigoo uu ku hadlaayo magaca wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska gaar ahaan Radio Muqdisho iyo SNTV, waxaan halkaan tacsi uga direynaa ehellada iyo asxaabtii uu ka tagay Abween Maxamed Cumar Nidaamiye waxan leeyahay samir iyo iimaan Alle haka siiyo, islmarkaan waxa uu ahaa abweenku sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka, muddo badan dalka u soo shaqenyay. waxaan sidoo kale tacsi uu diriya dhamaan bahda fanka”.
Alle ha u naxaristii marxuun Maxamed Cumar Nuur Nidaamiye oo ka mid ahaa abweenada Soomaaliyeed, waxuu ka dhashay magaalada Dhusmareeb ee xarunta gobalka Galgaduud sanadkii 1939, Wuxuu wax ku bartay magaalada Beydhabo. Wuxuu ku biiray ciidanka XDS oo ka gaaray Korneyl, sidoo kale wuxuu ahaa abwaan sameeya heesaha isla markaana laxammeeya. Wuxuu ahaa muddooyinkii dambe agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda warfaafinta.
Wasiirada Arrimaha Dibadda Kenya Iyo Ethiopia Oo Kismaayo Gaaray
Madaxweynaha oo gaaray Kismaayo